MAGNOLIA: SIFOOYINKA BEERITAANKA IYO DARYEELIDDA WARSHAD ARISTOCRATIC AH - BEERTA
Dhab ahaantii dad badan oo ugu yaraan hal mar waxay joojiyeen guga iyagoo horay u ah dayrka beerta ama beerta, iyada oo aanad ku qanacsanayn sawir aan caadi ahayn - ubaxyo casaan ah, midab cadaan ah ama guduud ah oo ku yaal geedka qurux badan oo aan caleemo lahayn. Waxay kala duwantahay magnolia. Marka ugu horeysa waxay u egtahay in mucjiso noocaan oo kale ah lagu beeray beeraley khibrad leh, iyagoo maalgashanaya maaliyad badan iyo dadaal aad u badan. Aynu isku dayno inaanu hubino in tani ay run tahay adoo sheegaya sida loo koro Magnolia.
Magnolia (Magnolia) - Geedka dhoobada ah ama geedo qoyan oo dhir ah oo dhererkiisu ka socdo 2 illaa 30 m oo leh ubaxyo qurux badan leh ballaciisu yahay ilaa 25 cm, kuwaas oo ku yaal mid ka mid ah dhinaca dambe ee laanta.
Tani waa warshad aad u qoto dheer. Wuxuu ku dooday in uu yahay aabaha dhirta ubaxyada casriga ah. Geedkani waxa uu caan ku yahay Shiinaha, halkaas oo ay jiraan caqiidooyin badan oo ku saabsan.
Ma taqaanaa? Magnolia waxaa lagu qiimeeyaa ma aha oo kaliya quruxdiisa. Caleemaha, ubaxa iyo miraha waxay ka kooban yihiin saliidyo lagama maarmaan ah oo ka caawiya dhiig kar kacsan, rootimad iyo dhibaatooyin dheefshiidka. Waxa kale oo loo isticmaalaa dhadhanka.
Geedkii wuxuu u yimid Europe qarnigii 17aad, halkaas oo uu ahaa Magnolia magaciisa oo lagu magacaabo Agaasimaha mid ka mid ah jardiinooyinka botanical ee Faransiiska, Pierre Magnol. Tan iyo markaas, dalxiisayaashu waxay soo bixiyeen noocyo kala duwan oo noocyo iyo noocyo farabadan. Maanta, qiyaastii 80 nooc ayaa lagu beeray, qaabab kala duwan iyo qiyaasta taajka, midabka iyo qaabka ubaxa.
Magnolia: xulashada goobta degelka
Ka hor intaadan tegin si aad u sii kordhiso magnolia-gaaga beertaada oo aad daryeesho, waxaad u baahan tahay inaad doorato nooca saxda ah, noocyada kala duwan iyo goobta beeritaanka. Tan iyo dhibaatada ugu weyn ee geed gaaban yahay waa u dulqaadashada liidashada dhaxan, markaad dooranaysid nooca dhirta, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato sida xilliyada qaboobaha ee gobolkaaga, iyo nooca khaaska ah ee ku habboon xaaladaha cimiladaada. Magnus-qaboojiye-qabow u adkaysta Kobus iyo Lebner. Dhaliyeyaasha adag ee Magnolia Sulange, Wilson, Ash ayaa si fiican u dulqaadan.
Marka aad dooranayso goob lagu beerayo, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo in warshadani aysan u dulqaadan doonin si aad u wanaagsan, sidaas darteed goobta waa in, haddii ay suurtogal tahay, laga ilaaliyo dabaysha waqooyiga iyo bari, tusaale ahaan geedaha sare.
Waa muhiim! Waa in aanad beeran dhirta miraha geedo midho leh, sida miraha dhicida waxay waxyeeleyn karaan ubaxa waxayna jebiyaan laanta geedka.
Waa lagama maarmaan in la daryeelo iftiin ku filan meesha, si aan geedku uugu jirin meel hoos u dhaadheer. Sidoo kale, warshadu waa inaysan dhexgalin qoraxda tooska ah. Ka-reebitaanku wuxuu noqon karaa magnolias Lebner, Kobus iyo xiddig-qaabeeya, oo kori kara meelaha bannaan. Kobus sidoo kale wuxuu u adkaysanayaa gaasaska qiiqa iyo saadasha warshadaha, taas oo u oggolaanaysa in lagu beeray meel u dhow wadooyinka mashquulka ah iyo meelaha warshadaha.
Maanta, Magnolia waxaa inta badan loo isticmaalaa beerta jilicsan, sidaas darteed talooyin badan ayaa loo qoray sida loo koro ubax-ubax shaqsi ahaan, kuwa ugu weyn ee aan kula wadaagno adiga.
Goorta la beerayo Magnolia beerta
Geedka waxaa lagu beeray labadaba guga iyo dayrta. Inkasta oo milkiilayaashii waayo-aragnimo ee khibrada leh ay ku taliyeen ikhtiyaar dambe Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah ka hor xilliga dayrta beerto dhirta waa nasasho, oo sidaas darteed waxaa u fududahay inuu u gudbiyo jiilaalka. Iyo beerashada guga, geedku wuxuu bilaabmaa koboca firfircoonida, wuxuu siiyaa koror ballaaran oo inta badan la kulmo xilliga jiilaalka horay u leh caleemo, taas oo wakhtigaan waqtigani aysan waqti u helin in lagu daboolo qoryo iyo dhimasho.
Sida loo aaso Magnolia
Magnolia ma aha mid aad u xishood badan, laakiin marka beerto iyo daryeelidda waxaa lagama maarmaan ah in la raaco xeerarka fudud, taas oo ah, ugu horreyntii, waxay la xidhiidhaan halabuurka ciidda, waraabinta iyo quudinta.
Sababta loo yaqaan 'Magnolia sapling' waxaa laga helaa dukaamo khaas ah oo wanaagsan. Badanaa waxaa lagu iibiyaa weelasha. Dhirta noocan oo kale ah waxaa loo dulqaadan karaa guga iyo beeritaanka dayrta labadaba, tan iyo markii lagu beeray dhoobo dhulka ah, taas oo ay horey u qabteen. Bannaanka u leh waayo-aragnimo ah beeritaanka ku talinaynaa soo iibinta dhirta 1 m ee dhererka leh labo ka mid ah ubaxyo hore loo yaqaanay. Sidaas darteed waad ogaan doontaa in cimiladaada deegaankaagu ku habboon tahay nooca magnolia.
Ciidda beeritaanka waa in ay ahaato iftiin, si fiican u da'ay iyo dhexdhexaad ah qoyan. Goob caadi ah ama ciidda daciifka ah ee hodanka ah ayaa hodan ku ah arrinta ku xeeran.
Waa muhiim! Magnolia waa ka hortag u ah lime iyo saline land.
Haddii ciidda ku taal boggaagu yahay lime, markaa waxaad ku dari kartaa peat si, taas oo kordhin doona aysidhka.
Halbeegga ugu wanaagsan ee ciidda:
caleenta ama dhulbeereedka - 1;
peat - 2;
ciid - 0,5.
Habka beeritaanka Magnolia
Ceelka for beerto waa in la diyaariyaa horay, 3-5 jeer cabbirka nidaamka xididka geedka. Dheecaan ayaa lagu dhejiyaa hoosta godka - 15 cm sare, ka dibna lakabka ciidda (10 cm), lakabka digada (15 cm), mar labaad lakabka ciid (15 cm) iyo isku darka ciidda la diyaariyey ayaa la dhigay. Taas ka dib, seedling waxaa la dhigayaa god iyo daboolay dhulka, iyadoo la xakameynayo in collar xididka aan la aasi. Qodobka ugu badan ee lagugula taliyay waa 2.5 cm. Dhulku waa in si fudud loo tamped oo u waraabiyaa si aad u badan. Meesha Pristvolny waxaa lagu dabooli karaa jilif cufan, kaas oo hayn doona heerka la rabay ee qoyaanka.
Magnolia uma dulqaadanayo tallaalidda, sidaas darteed waa in isla markiiba lagu beeray meel joogto ah. Haddii aad qorsheyneyso inaad dhirato dhowr geed, markaa masaafada u dhaxeysa waa inay ahaataa ugu yaraan 4-5 m.
Noocyada Daryeelka Magnolia
Ka dib markii la beero miro-beel ku habboon iyada caafimaadkeeda waxay ku xirnaan doontaa daryeelka caafimaadkeeda. Ma jiraan faraqyo asaasi ah oo ka yimaada daryeelka geedaha midhaha caadiga ah kiiskan.
Waxaad u baahan tahay inaad waraabiso dhirta yar yar, iyo xilliga qallalan iyo dadka waaweyn. Wanaagsanaanta geedku wuxuu u baahan yahay waraabinta toddobaadkii hal mar qiyaasta 2-3 baaldiyo oo biyo ah. Haddii xagaaga uu aad u qalalan yahay ama magnolia wuxuu ku koraa ciidda ciidda, ka dibna xajmiga iyo dhererka biyo badan ayaa la kordhin karaa.
Xididdada magnolias waa mid muuqaal leh, sidaas darteed dhulka dhulka hoostiisa waa in la daboolaa qoto dheer oo ah 20 cm, halka sidan loo samaynayo taxadar leh, marka laga reebo iyada oo aan la isticmaalin majarafad ama qadhaadh. Booguhu way ka fiican yihiin inay jiidaan. Ka dib marka geedku gaaro 3 sano jir, wareegga jirridda waxaa la geyn karaa maaddooyinka dabiiciga ah (caleemaha waaweyn, peat, sida balka, digada). Tani waxay diirin doontaa ciidda waxayna bixisaa ilo dheeri ah oo nafaqo ah. Hawlahaas ka dib, dhulku mar dambe ma furmi karo.
Goorta iyo sida loo bacrimiyo magnolia
Waa lagama maarmaan in la quudiyo oo bacrimiyo geed aan ka horeyn 2 sano ka dib markii la beero. Guga hore, waxaad ku dari kartaa quruxdaada leh isku dar ah 1 kg oo ah mullein, 15 g HOL, 25 g oo amooniyam ah. Bilowga xilliga dayrta ee bacarimaynta leh nitroammofoska (20 g / 10 l oo biyo ah) ayaa faa'iido leh. Heerka waraabka - 40 litir oo geed ah.
Waxaad isticmaali kartaa bacrimin "Kemira-Universal" (1 tbsp / 10 l oo biyo ah), iyo sidoo kale Bacriminta gaarka ah "For Magnolia".
Waa muhiim! Haddii dhamaadka bisha July magnolia caleemaha bilaabay in ay qalalaan, waxay la macno tahay in ay jirto xad dhaaf ah ee Bacriminta. Xaaladdan oo kale, dhirta waxaa loo qoraa waraabin badan oo waraabin ah.
Tan iyo moolojiyadu ma u dulqaadanayaan manjooyin, nidaamkani wuxuu lagama maarmaan u yahay ulajeedyada loogu talogalay sanadaha ugu horreeya ka dib marka la beerto si loo siiyo qaabka la doonayo ee taajka. Si aad uga qayb qaadatid geeddi-socodkan waxaa lagamaarmaan ah, sababtoo ah taasi waxay dhalin kartaa ubax yar oo firfircoon. Mustaqbalka, waxaa lagu talinayaa oo kaliya manjooyin nadaafadda sanadkiiba mar, kaas oo ah qalalan, curved, laamood oo waxyeello laga saaray. Haddii taajku sii bataa, ka dibna waa la soo saaraa. Si ay si degdeg ah u bogsiiyaan, waa in lagu daboolo garoonka beerta.
Magnolia: sida loo badbaadiyo geedka jiilaalka
Dhirta dhirta ah ee jiilaalku waxay u dulqaadanayaan heerkulka ilaa -25-30 ° C. Sidaa daraadeed, su'aasha ah sida loo ilaaliyo moolka weyn ee xilliga qaboobaha lagama maarmaan u ah milkiilaha. Laakiin dhirta yaryar waxay u baahan yihiin inay walwalaan Saddexda sano ee hore, qaybta hoose ee jir-ka iyo nidaamka xididka ah (ama xitaa qoryaha oo dhammaystiran) waa in lagu xakameeyaa agrofabric (lutrasil), joonis, caws ama leyliyaan laamood. Iyada oo da'da, adkaynta magnolia ayaa sii kordheysa.
Sanadaha soo socda, dhulka ku yaala wareegga geedka waa in la googooyaa balka, jilif geed, iyo peat dayrta.
Magnolia Nidaamka Horumarinta
Magnolias waxay u tarjuntaa saddex siyood:
qashin iyo gooyn,
In dabeecadda, magnolias ku beeray by abuur ah in ay qaadaan shimbiraha. Waxaad kaloo isku dayi kartaa in aad geed ka abuurto abuurka. Tani waa in la sameeyaa xilliga dayrta, isla markiiba ka dib markaad soo qaadato berry. Ama dib u dhig ilaa guga, laakiin miraha ku hay qaboojiyaha bac caag ah.
Pre-abuur waa in lagu shubaa 3 maalmood biyo, ka dibna lagu nadiifiyaa qolof dhuxul leh (tusaale ahaan, xoqidda shaandho). Ka dib marka la nadiifiyo, waa in lagu maydiyaa saabuun daciif ah oo lagu duro biyo nadiif ah dhowr jeer. Ku samee sanduuqyada si qoto dheer ah 3 cm carrada caalamiga ah. Awoodda u nadiifi maqaasiinka ilaa guga. Horraantii Maarso, waxay u baahan yihiin in loo wareejiyo daaqadda daaqada ka hor biqilka. Geedo waxaa la beeray karaa hal sano ah. Sidaa awgeed waxaad yeelan doontaa magnolia-gaaga, dhalashada kaas oo aad horay u ogtahay sida loo daryeelo.
Ma taqaanaa? Maaddaama magnolias ku nool yihiin dabiiciga ah meelaha leh qoyan qoyan iyo qalalan, geedaha diiran, geedo si tartiib tartiib ah u kaca sannadka ugu horreeya ee nolosha. Leaves kaliya waxaa la filayaa dhexe dhexe ee xagaaga, iyo geedo si firfircoon koraan oo kaliya dayrta.
Marka habka daaqsinka ah ee dhalmada (lalabixinta iyo grafting) magnolias galaan wajiga ubax hore ka badan abuurka. Habkani wuxuu siiyaa natiijada ugu fiican sanadaha hore ee nolosha geedka.
Markaad taranto adoo geynaya xilliga gu'ga, waxaad u baahan tahay inaad hoos u dhigto oo aad ku rushayso mid ka mid ah laamaha hoose ee dhulka. Sannad ama laba sano, xididdadu waa inay sameeyaan. Ka dib markaa, lakabyada si taxadar leh ayaa loo kala soocaa geed hooyada oo lagu beeray si ay u koraan.
Dhammaadka bisha Luulyo, waxaad isku dayi kartaa inaad raacdo. Gooynta waxaa laga soo qaaday geedo yar yar, ka tago 2-3 buundo ee qaybta sare. Qeybta hoose waxaa lagu daaweeyaa walax kasta oo loo yaqaan 'rooting'. Kadibna waxaa lagu beeray aqalka dhirta lagu koriyo, weel qashin leh, dabool leh dabool leh oo lagu hayo heerkul ah + 19-22 ° C iyo qoyaanka lagama maarmaanka ah. Boodbadu waa inay dhacdaa 5-8 toddobaad. In guntooda dhulka u furan yihiin lagu beeray hal sano ah. Haddii bararka si deg deg ah loo fuliyo dhulka, markaas waxay u baahan yihiin inay bixiyaan hoy wanaagsan si ay ugu wareejiyaan qabowga.
Habka faafinta by graves ayaa kuu ogolaanaya inaad ku guuleysato koritaanka degdeg ah ee warshadda, fruiting hore, kordhay adkaysiga. Si kastaba ha noqotee, habkani wuu ka shaqeeyaa marka loo yaqaan "grafting". Tallaallada waxaa lagu sameeyaa horraanta gu'ga ah ee aqalka dhirta lagu koriyo ama goobaha furan iyadoo la adeegsanayo hababka kobcin, gaaban ama goynta.
Inkasta oo ay quruxdeeda tahay mid aan qurux badneyn iyo muuqaal la'aanta, Magnolia waa mid aan qabin marka koraan. Si dhakhso ah ayuu u koraa, marar dhif ah ayuu jirraa, waana mid aan waxyeello lahayn cayayaanka iyo jiirka. Haddii aad siiso daryeel haboon, waxay kugu farxi doontaa ubax iyo caro badan sanado badan oo soo socda.